लौ छुट्याउँनुहोस् एलआईसी राम्रो कि नेशनल लाईफ ?
गृहपृष्ठ » अर्थ » लौ छुट्याउँनुहोस् एलआईसी राम्रो कि नेशनल लाईफ ?
जीवन बीमा क्षेत्रका लाईफ ईन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल र नेशनल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीले बिहीबार एकसाथ बित्तीय बिबरण प्रकाशित गरेपछि उनीहरुको प्रगति केलाउन लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएका छन् ।
आक्रामक ढंगले जीवन बीमा अभियानमा अगाडि बढेको यी कम्पनीहरुको बित्तीय विवरणलाई तुलना गर्दा केही आधारभुत भिन्नताहरु देखिएका छन् ।
नेशनल लाईफको चुक्ता पूँजी धेरै देखिन्छ भने एलआईसीको कम छ । एलआईसीको जीवन बीमा कोषमा १० अर्ब ९१ करोड रकम छ भने एलआईसीको एक अर्ब ७८ करोड मात्र रकम छ ।
नेशनल लाईफले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासमा सात करोड ८२ लाख कमाएर गत बर्षको सोही अबधिको तुलनामा ६३ प्रतिशतले बढाएको छ भने एलआइसी नेपालले दुई करोड १७ लाख मात्र खुद नाफा कमाएको छ जुन गत बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४३ प्रतिशतले मात्र बृद्दि हो ।
नेशनल लाईफको जगेडा कोषमा ४३ करोड ५९ लाख छ भने एलआसीको यस्तो कोषमा ३५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ छ । महाविपत्ति कोषमा नेशनल लाईफको तीन करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ भने एलआईसीको तीन करोड ११ लाख मात्र छ ।
नेशनल लाईफले दोस्रो त्रैमाससम्ममा एक अर्ब ३४ करोड बीमा शुल्क आर्जन गर्यो भने एलआईसीले दुई अर्ब ३९ करोड बीमा शुल्क आर्जन गर्यो । बीमा दाबी भुक्तानीमा भने नेशनललाईले एलआईसी भन्दा झण्डै दोब्बर ४१ करोड ९१ लाख गरेको छ । नेशनल लाईफको बीमा लेखसंख्या २९९५३८ र ४४३३१८ छ । बोनस दरमा नेशनल लाईफ र एलआईसी दुबैको समान ६१ देखि ७५ रुपैयाँ छ ।
नेशनल लाईफको प्रति शेयर आम्दानी १९.९७ हुँदा शेयरको बजार मूल्य २४२० मात्र छ भने एलआईसीको प्रति शेयर आम्दानी ३.३० रुपैयाँ हुँदा शेयरको बजार मूल्य ३४४० रुपैयाँ छ । दुबै कम्पनीको दोस्रो त्रैमासको बित्तीय विवरणमा बिमांकीय मूल्याङकनबाट आउने हिसाव समाबेश छैन । यो समाबेश भएमा खुद नाफामा अरु बढोत्तरी हुनसक्छ ।